Asia Korea Atsimo
Ny toeram-pisakafoanana malaza any Korea Atsimo dia iray amin'ireo toerana lehibe indrindra amin'ny Lalao Olympika amin'ny 2018. Tsy misy afa-tsy 200 km miala ny renivohitry ny firenena. Eo amin'ity faritra ity, ny lany indrindra dia latsaka, izay manimba ny kalitaon'ny làlana.
Ny toetr'andro eo an-toerana dia tsara ho an'ny skiing. Tsy misy oram-baratra mahery vaika, oram-panala, na oram-be mafana loatra, noho izany no hijaly ny rakotra ranomandry eny an-tendrombohitra. Ny halehiben'ny halafon'ny ririnina dia eo amin'ny -5 ° C, amin'ny fahavaratra dia ampy ny hafanana eto, hatramin'ny 25 ° C.
Ny toeram-ponenana dia miorina amin'ny tendrombohitra Parvansan, mitombo mihoatra ny 1000 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Mandritra izany fotoana izany, ny tehezan-dry zareo dia somary marefo, fa tsy vatolampy, izay nahafahana nanamboatra lalana mahazatra naharitra 2, 3, 4 ary na dia 5.5 km aza. Ny fisokafana dia natao tamin'ny taona 1975, taorian'izay dia nisy fifaninanana maro manerana izao tontolo izao, ohatra, ny Mondialy tamin'ny taona 1998 sy ny lalao ririnina amin'ny taona 1999.
Ny lalana manidina avy amin'ny tendrombohitra roa mifanila aminy Golden peak 1127 m ambony ary ny tampon'ny dragona 1458 m. Izy ireo dia tohivakana 15, ny iray amin'ireo dia gondola. Skipass dia mitentina $ 64 isan'andro.
Ny lalana rehetra an'ny Yongpyong dia antsoina amin'ny loko samihafa:
Ny jiro mavo sy mavo dia mety tsara ho an'ny mpandray anjara;
Ho an'ny atleta fampiofanana amin'ny fampiofanana dia natao ny Red sy Green;
Ao amin'ny Silver sy Gold dia ilaina ny mandeha fiara ho an'ny olom-pirenena amin'ny hoavy amin'ny taona 2018.
Azo antoka fa ilaina ny manamarika ny làlana ho an'ny mpilalao snowboard, izay tsy mitovy amin'ny ambaratonga eran-tany ary tsy ampiasaina amin'ny fiaramanidina tsotra fotsiny, fa koa amin'ny fanatanterahana ireo tricks isan-karazany.
Inona no tokony hatao ao Yongpyong afa-tsy amin'ny skiing tendrombohitra?
Ny toeram-ponenana dia miaina tsy amin'ny ririnina, fa amin'ny fahavaratra koa, dia misy fialam-boly isan-taona. Maro amin'izy ireo no hahaliana ho an'ny mpitaingina amin'ny ririnina, ary ny sasany dia handrisika ireo mpizaha tany amin'ny fahavaratra:
lalam-be golf 18-hole golf miaraka amin'ny lalao golf ho an'ny mpandray anjara;
Ny dobo filomanosana sy ny sauna dia misokatra isan-taona;
toeram-piantsenan'ny ankizy, izay ahafahanao mandeha eny an-dalantsa eny an-tendrombohitra;
Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra dia misy kianja fanaovana tennis, afaka milalao kroquet ianao na mandeha mitsangatsangana any anaty ala;
Amin'ny ririnina dia mitaingina sambo sy skate;
Ny ankizy sy ny olon-dehibe dia liana amin'ny fampiofanana amin'ny tsipika.
Safidy tsara ho an'ny trano fialan-tsasatra no manakaiky ny havoana, noho izany dia tsy voatery mandeha isan'andro ianao eny an-dalamby eny amin'ny seranan-tsambonao na eo an-toerana. Ny hotely malaza indrindra any an-dohasaha dia eo an-dalam-pandehanana mankany amin'ireo fiakarana amin'ny ski:
Ny Ski Ski Yongpyong dia hotely tsara ho an'ny fialam-boly na amin'ny ririnina sy amin'ny fahavaratra. Any akaikin'ny kianja golf, dia manana fiara manokana.
Ny Dragon Valley Hotel - iray amin'ireo hotely malaza indrindra ao amin'ny Lohasahan'i Dragon, dia nahazo fanehoan-kevitra tsara avy amin'ireo mpizaha tany manerana izao tontolo izao.
Holiday Inn Hotel & Suites - ny trano fandraisam-bahiny mahazatra manome antoka ny fanompoana tsara indrindra amin'ny vidiny sarobidy.
Yongpheng Restaurants sy Cafes
Toeram-pisakafoanana mahafinaritra amin'ny sakafo Koreana na Aziatika - tsy ny hany eto. Ny mpihazakazaka miondrika dia afaka mitsidika kafe tsotra miaraka amin'ny sakafo haingana na mipetraka ao amin'ny trano fisakafoanana mahavelona izay manolotra lovia manerana izao tontolo izao. Olona iray dia ho faly amin'ny fihinanana saka, ny hafa dia manatona pizza, ary ny fahatelo dia hahatsapa ny fikajiana ao an-toerana. Azonao atao ny manandrana izany rehetra izany ao anaty cafe eo akaikin'ny làlana:
Lotteria - Kafe demokratika misy billiards Amerikana sy fialamboly hafa;
Bossam - sakafo karana koreana ;
Lotteria Alpensia Resort - trano fisakafoanana maoderina iray manan-tantara amin'ny hotely tsara tarehy. Eto ianao dia mahita atmosfera miavaka, sapitra malefaka, fiompiana, lovia ary sakafo matsiro.
Ahoana ny hahatongavana any Yeonpyeong?
Misy fiara fitateram-bahoaka avy any Seoul mankany amin'ny tanàna akaikin'i Hong. Mila mankany amin'ny seranan-tsambo bus Dong Seoul ianao, ary avy eo dia miova amin'ny alàlan'ny fiaramanidina maimaim-poana izay mandeha mivantana mankany amin'ny havoana.
Eva Longoria naneho ny fitiavany ny olom-pandriany
Vavaka ho an'ny fanampiana
Ahoana ny fomba fialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny filan'ny nofo?
Salady miaraka amin'ny alika Adyghe
Brugmansiya - mitombo
Ary ahoana raha malahelo sy malina ilay zaza?
Nahoana ianao no manonofy lozam-pifamoivoizana?
Mpiompy zokiny sy kiraro
Dresses for office 2014
Famongorana ao anatin'ny zazakely iray volana - inona no tokony hatao?
Ny olana ara-pahasalaman'i Elton John
Karohy tsy misy lanjany
Ny loko mafana sy mangatsiaka
Fricassee an'ny akoho miaraka amin'ny holatra - recipe